आज हामीले प्रयोग गरिरहेका सामानहरु आविष्कार हुने समयमा यस्ता थिए, पत्याउनुहुन्छ ?(तस्बिर सहित) « News24 : Premium News Channel
आज हामीले प्रयोग गरिरहेका सामानहरु आविष्कार हुने समयमा यस्ता थिए, पत्याउनुहुन्छ ?(तस्बिर सहित)
अहिले निकै चलन चल्तीमा रहेका केही चिजहरु जुन सुरुवाती आविष्कारको समयमा कस्ता थिए त ? हेरौं केही तस्वीरहरु
१)सनग्लासः यो धातुले बनेको वस्तु सबैभन्दा पहिले बनेको सनग्लास हो । यस्तो सनग्लास पहिरिएपछि आँखाले बाहिरको चिज के देख्दोहो र रु तरपनि मानिसहरुले यो लगाउँदथे । समयसँगै सनग्लासमा धातुको साटो काँच र अन्य पारदर्शी पदार्थको प्रयोग गरियो ।
२) अण्डरवेयरः यो चिज गाउँतिर ढिके नुन राख्ने बाँसको ढुंग्रोजस्तो देखिन्छ । तर वास्तवमा यो मानिसले लगाउने सुरुवाती चरणको अण्डरवेयर हो । यसले केवल पुरुष यौनांग मात्र छोप्दथ्यो । पपुवा न्युगिनीमा धेरै वर्ष अघिसम्म मानिसहरुले यहीँ अण्डरवेयर लगाउँदथे ।
३) हेयर ड्रायरः पहिलेका जमानामा यस्तो अनौठो खाले हेयर ड्रायर प्रयोग हुन्थ्यो । यसमा तातो पानी भरेर कपालमा लपेटिन्थ्यो ।
४) सुईः यो गर्भपतन गर्नका लागि प्रयोग गरिने सुई हो । मेडिकल साइन्सको क्षेत्रमा अहिले गर्भपतन प्रयोग हुने प्रविधि कहाँ पुगिसक्यो, थाहै छ ।
५) टुथपिकः दाँत कोट्याउने चिज अर्थात् टुथपिक पहिले यस्तो थियो । यो टुथपिक सन् १६२० को हो ।
६) जासुसी क्यामराः दोश्रो विश्वयुद्धको समयमा प्रयोग गरिएको क्यामराको तस्वीर हो यो । परेवा यो क्यामरा बोकेर शत्रुको माथि आकाशमा उड्थ्यो । अनि सोही क्यामराले खिचेका तस्वीर हेरेर शत्रुपक्षको संख्या कति छ र कति शक्तिशाली छ भन्ने कुराको जानकारी लिइन्थ्यो ।
७) चम्चाः पहिले यो काठको चम्चाले मान्छेलाई होइन भालुलाई खाना खुवाइन्थ्यो । तर भालुलाई किन चम्चाले खाना खुवाउने रु भन्ने कुरा चाहीँ झनै अनौठो छ ।